Degso Norton AntiVirus loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (79.88 MB)
Degso Norton AntiVirus,
Norton AntiVirus waa barnaamij xallin amni oo xirfad leh oo bixiya difaac horumarsan oo ka dhan ah fayrasyada, spyware, marka la soo koobo, dhammaan barnaamijyada iyo faylasha waxyeeli kara kombuyuutarkaaga. Haddii aad rabto inaad si buuxda u ilaaliso kumbuyuutarkaaga oo aad u ilaaliso software-ka xun ee halista amniga u horseedaya nidaamkaaga, waxaad ku sameyn kartaa tan Norton AntiVirus, oo bixisa difaac waqtiga-dhabta ah.
Barnaamijka, oo kormeeraya dhammaan howlaha ka socda kombuyuutarkaaga adiga oo aan gadaal kugu dhibin, wuxuu kaaga digayaa marka uu arko qatar nooc kasta oo xog isweydaarsi ah. Norton AntiVirus, oo waliba xakamayn kara e-maylka iyo barnaamijyada fariimaha degdega ah (IM), wuxuu kaa ilaaliyaa fayrasyada ka iman kara kuwa kale wuxuuna kala soocayaa faylasha ay ku jiraan barnaamijyada xun xun sida fayrasyada, spyware, iyo adware kuwa caadiga ah.
Norton AntiVirus waa mid ka mid ah barnaamijyada sida joogtada ah isu cusbooneysiiya isla markaana bixiya ilaalinta ugu fiican qaab dhismeedkeeda oo had iyo jeer laga diyaar garoobo fayrasyada iyo hanjabaadaha ugu dambeeya, sidaasna nidaamkaaga loogu diyaariyo dhammaan halista cusub.
Norton AntiVirus Noocyada
Cabirka Faylka: 79.88 MB
Horumar: Symantec Corp.